Waraysi ay Somalitalk.com la yeelatay Xildhibaan Cabdi Cabdulle Saciid “ Jinni Boqor”.
Waa in wadanka gudihiisa laga abaabulo hubka dhigista ee aan loo aadin Addis-abbaba. Waana in dadka la wacyi galiyaa.
Bad iyo barri wixii hanti ka soo galayey P.L wuxuu C/Laahi u isticmaalay tartankiisii musharaxnimo
Xildhibaan Cabdi Cabdulle Siciid “ Jinni Boqor” wuxuu kamid yahay raggii mudada dheer saaxiibada Siyaasadeed ay ahaayeen Madaxwenaha cusub Mudane C/Laahi Yuusuf Axmed. Wuxuu Jinni boqor xubin firfircoon ka’ahaa Jabhadiii S.S.D.F. sida dad badin ay sheegaan Jinni Boqor waxay C/Laahi Yuusuf isku xulufo noqdeen sanadkii 78.kii ilaa muddo dhawna waxay ahaayeen dad isku siyaasad ah. Waxayse is qabteen wax yar ka hor intii aysan doorashadu dhicin.
Hadaba Jinni Boqor oo kamid ah Sharciyaqaanadda Soomaaliyeed ayaa fikradiisa ka dhiibanaya sida ay ula muuqato mustaqbalka Soomaalida, wuxuuna talooyinka ka bixinayaa sida ugu hoboon oo dadka hubka looga dhigi karo.
S: Mudane Xildhibaan. Dhismihii dowaldda Soomaalida intii ugu muhimsanayd waa lataagay, makula tahay in tallaabo weyn horay loo qaaday intii ay dowladdu jirtay.
Jini-Boqor: Anniga arragtidaya dowladdu wali wax hor mar ah oo la taaban karo maysan sameyn marka laga reebo madaxweynaha oo safar ku tagay Itoobiya, Ugandha, iyo dhawr dal oo carbeed, wararkuna waxaa ay sheegayan marka dhanka dublumaasiyadda la eego in si qabow loosoo dhaweeyey, dhaqaalo uu illa hadda helayno ma jirto, dalabkii uu ciidamada shisheeye dalbadayna sidii uu rabay uma hirgalin, Waxaa ay u eg tahay in aan baraf ku dulsocono. Amuuruhuse waxay kala cadaan doonaan markii dowladda lageeyo Muqdisho dib u heshisintiina gudaha laga bilaabo, labadaas qodob ayaad moodaa in ay beesha caalamku cabdullaahi Yuusuf ka sugayso wuxuu ka qabandoono
Su`aal: Waxad Og tahay dhawaan haddii lagu dhawaaqo Gollaha Wasiirada in ay dowladdu aadi doonto gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaana jira in la isku hayo magaaladda ama meesha ay dowladdu xarun ka dhiganayso sidee u arragtaa arrintaas magaaladeese kula haboon in ay dowladdu ku shaqeyn karto?
JiniBoqor: Arrintaas waa cadahay magaala madaxdu waa Muqdisho, dowladda in la geeyana sharci ahaan, siyaasad ahaanba, iyo dhaqaale ahaanba, wey haboon in Muqdisho lageeyo. Waxaanse maqlay inuu Madaxweynuhu doonayo inuu caasimad kale sameeyo oo meeshuu doono dowladda geeyo. Taasna waxaan u arkaa in ay qalad-weyntahay, umana arko inay shaqeyn doonto. Taariikhda aan ognahay dowlado badan ayaa isku dayey inay laba caasimadood sameeyaan. Jarmalka ayaa ka mid ah, dagaalkii labaad kadib Baarliin ayuu ka guuray oo Boon uyii caasimaddii uraray, dhawaan ayeyna Baarliin ku soo noqdeen. Nayjeeriyana sidoo kale Abuuja ayey ka dhigatay caamisamad iyadoo ka soo guurtay Leegos, labaatan sano ka hor ayaduna waa shaqeyn wayday. Tanzaniya ayaa ka mid aheyd oo isku dayday inay caasimad ka dhigto Dhadhoma iyadana Sodon sano ka hor iyana waa shaqeyn wayday. Dhinac kasta oo laga eego dhinaca siyaasada, dhinaca dhaqaalaha, dhianaca sharciga, dhinaca dib-u-heshiisiinta, iyo is’aaminnada Soomaalida dhexdeeda, caasimadu waa inay Muqdisho noqotaa. Haddiise uu Cabdullaahi Yuusuf isku dayo inuu Meel kale la aado magaalo madaxda, taas macanehede waxaa weeye dib u heshiisintii waa faanole fari kama qodna, waa in geesinimo iyo niyad sami lagu shaqeeyaa, USC oo Cabdullaahi si lama filaan ah madaxweynanimadii uga qaatay inuu haddana yiraahdo Caasimadii ayaan Muqdisho ka rarayaa, waa bahdilid iyo ihaanaysi uu ula bareeray beesha Hawiye, mana shaqeyn doonto fikradaasi. Waxan qabaa inaan la carqaladeyn sharciga, dowladdana Muqdisho la geeyo.
S: Sida aan ognahay Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf dhawaan markii uu booqday xarunta Midowga Afrika ee Addis-abbab ee dalka Itoobiya waxaa uu midowga afrika ka codsaday Ciidamo gaaraya illaa labatan kun oo askari, si ay hubka dhigista uga qeybqaatan, dawladdana gacan u siiyaan, waxaanan ognahay inaad adigu madax ka aheyd gudigii labaad ee shirweynihii qaranka Soomaaliyeed uu u xilsaaray hubka dhigista iyo dhaqan celinta, marka sidee kuugu muuqataa ciidamadaas uu madaxweynuhu ka dalbaday Midowga Afrika, mase kula tahay inay gacan ka geysan karaan hubka dhigista?
JiniBoqor: Waa run gudigaas oo ka mid ahaa lixdii gudi ee joogtada ahaa ee uu shirku u xilsaaray inay diyaariyaan hawl fududeyna ku smaeeyaan sida ugu haboon, uguna fudud ee dadka Soomaaliyeed hubka looga ururin karo, aad baan uga shaqeynay, bulshada caalamkuna waa nala shaqeysay, illaa saddex goor ayaan Soomaaliya geynayn wafdi xaqiiqo raadin ah, gobolada dalka oo dhan wey booqdeen, laga soo bilaabo Boosaaso, Muqdisho, Baydhabo, Bladweyne, iyo Kismaayo, arragtida hubka dhigistu waxay ahayed oo aan ku talinay in wacyigalin balaraan lasameeyo oo loo sheego dadka Soomaaliyeed in hubku cadowgooda yahay, ayna haboontahay iney iska dhigaan, iyadoo aan lacagna laga siin, xoogna looga qaadin, waayo qorshaha dib-u-heshiisiinta marnaba kuma jirin in xoog la isticmaalo. Aniga waxaay iila muuqatay inuu Madaxweynuhu arrintaas ku deg degay oo uu ku fududaaday, iyadoo aan xukuumaddii la dhisin, dalkiina la tagin, dadkii Soomaaliyeedna aan wada tashi lala sameyn, inuu Midowga afrika waydiisto Ciidan dhan labataan kun ilaa soddon kun oo soomaaliya hubka dhigis ku sameeya, taas madaxweynuhu kamfiirsan, wuxuuna qaatay fikrad ah in Soomaaliya hubka Xoog looga dhigo iyadoo la’adeegsanayo ciidamo shisheeye, weynu ognahay oo horaybaa taas loogu khasaaray. Soomaalidii shirka joogtay iyo caalamkuna waxay ku heshiiyeen in xooggii, iyo is caburintii dhamaatay, shakigii qabaa’ilkii dagaalayna wali ma dhamaan, Soomaali badan madaxweynaha waxaa ay utaqaan nin aan la aamini Karin, oo wuxuu doona sameeya assagoo aan cidna la tashan, Wuxuu jecel yahay ciidan iyo xoog in la isticmaalo, sifiican ayaan u aqaan Madaxaweynaha, dhaqan ahaan ma jecela talawadaag, mana isticmaalo macnaha Dimuquraadiyadda. Haddaan usoo laabto codsigiisii midowga afrika ee labaatanka kunee ciidanka ah, waxaa loo qaatay waxaan waqtigaan suurtoobi Karin, afrikna waxba ka qaban karto, ururka Afrika wuxuu la taagdaran yahay Ciidanki Daarfuur oo saddex ku oo kaliya ah, laguna qiyaasay dhaqaalaha ku baxaya $215 Milyan oo Dollar markii aad 215 Milyan ku dhufuto lix goor waxay noqonaysaa qarash aad ufara baddan oo uusan ururka Midowga afrika bixin karin waqtigaan aan joogno, Madaxweyne Cabdullaahi Yuusufna arragtidaya waxa u muuqatay hadduusan helin labaatan kun oo Ciidan ah inuusan waxba qaban karin, marka anniga waxay iigu muuqataa Soomaalidu inay hubka iskaga dhigto wadahadal, wacyigalinta dhalinyaradda, sidoo kale guud ahaan dadweynahaba, iyo in hanuunintii lagawada qeybgalo, is-aaminidna la abuuro, shakigana in la saaro, ciidamadii hore ee Soomaaliya oo dib loo abaabulo iyo aduun waynaha oo gacan la weydiisto arrimahaas oo dhana waxaan ku sheegnay Buuggii uu gudiga hub ka dhigista iyo dhaqan celinta soo saaray. Taasu waxaa ay ubaahan tahay in wadanka gudihiisa laga abaabulo hubka dhigista ee aan loo aadin Addis-abbaba. Marka hore sida ugu sahlan ee aan u arko marka la eego ciidamada shisheeye, waxaa ay gacan ka geysan karaan marka Soomaalidu ku heshiiso inay hubka iska dhigto, ayna iskaga dhigaan qaab ay isla ogolyihiin, oo aan xoog aheyn, taasna uma baahna labaatan kun iyo soddon kun midna.
Su`aal: Waxaan ognahay inaad mudo dheer soowada shaqeyseen Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf waxaase maalmahan soo if baxayey khilaaf idiin dhexeeya, maxaa sal dhig u ahaa khilaafkina? mase filaysaa inuu kugu soo daro dowladda dhawaan la dhisi doono?
Jiniboqor: Mudo ku dhaw soddon sano ayaan soo wada shaqeynayey aniga iyo Cabdullaahi Yuusuf. Waxaanna is khilaafnay wax yar ka hor intaan loo dooran Madaxayne-nimmada. Majecli hadda inaan faallo ka bixiyo sababaha rasmiga ah ee aan isku khilaafnay, Su’aasha ah rajo maka qabtaa inuu dowladda kugu soo daro. Jawaahtu waxay tahay waa MAYA maxaa yeelay, dhaqan-ahaan C/Laahi waa nin jecel inuu ka aarsado ninkii ay mar is-qabtaan, goobo badan ayuu hadda ka hor ka yiri, ma’abaal gudo, waanse aarsadaa. Sidaas darteed ma filaayo inuu xukuumada cusub ee la dhisayo igu dari doono, anniguna xilligaan diyaarba uma ihi inaan la shaqeeyo, waxaanse ahay xubinka mid ah Baarlamaanka KMG ah, waxaa aniga iyo Cabdullaahi naga dhexeeya sharciga iyo dasturka u yaal dalka haddii ay dowladdaan sidii loogu talagalay ay u hagaagtaba.
Su’aal: Maloo fasiri karaa iney fursad weyn ku seegtay haddeer maadam aad C/Laahi sodon sano wada shaqeyneyseen. maalintii uu Madaxweynaha noqdayna aad is gafteen. Marka goortii aad miraha la guran lahayd ayaad isku dhacdeen, madareemaysaa sidaas?
Jinni Boqor: Uma arko wax shiddo ah Siyaasiyiintu Siyaasadda wey wadaagaan waana ay kala weecdaan oo dhabarkey isu duwaan, annagu hadda dhabarkaan isu duwnay, umana arko wax dhibaato ah oo gaara oo aniga igu dhacay iney tahay. Kanbani Siyaasadeed baanu wadaagnay hadana waanu ku kala baxnay, marka nin waliba iyo nasiibkiisa.
Su`aal: Ma kula tahay inuu Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf ku guulaysan doono inuu dalka kusoo celiyo nabad galyo iyo kala dambeyn adigoon u eegeyn khilaafka siyaasadeed ee idiin dhexyaal, waliba dadka qaar waxay qabaan deegaanka Puntland markii loo doortay inuu ka abuuray nabad iyo xasilooni?
JiniBoqor: Marka hore Cabdullaahi Yuusuf Puntland nabad galyo iyo xasilooni kama dhigin, ee xasuuqyo kala duwan ayuu kasameeyey, dagaalkii Garoowe ku dhex maray asaga iyo wadaada, hal maalin kaliya wuxuu sabab u ahaa iney dhintaan sideed boqol oo wiil oo ilmo adeer ah, Garowe ilaa Boosasana waxaa ku dhintay Kun iyo shanboqol oo Wiil. sidoo kale waxay ciidamadiisu ku l-aayeen, deegaanka Qardhood dad kabadan illaa shan boqol oo qof, marka xaq umma lihid inaad tiraahdo nabad galyo ayuu kasameeyey deegaamada Puntland, taariikhdaana qoraysa wixii uu ka sameeyey Puntland, haddaan usoo noqdo midda taagan ee Soomaaliweyn Cabdullaahi Yuusuf waa nin da`ah, waana bukaan socod, hawl firfircooni u baahan lagama sugi karo, hawsha Soomaaliya ubaahan-tahayna waa hawl culus, waase nin xukun jeceloo wuu dadaali doonaa meel ay lagaartaba. Anigu waxaan qabaa dowlad xumi dowlad la`aan ayey dhaantaa, waxaana illa haboon in gacan lasiiyo si aan horay ugu tilaabsano oo ku gaarno dowlad tiisa ka fiican oo sal dhigeedu yahay Dimuquraadiyad iyo doorasho Xaq ah, oo dalka oo dhan ka dhacda, shaki weyn ayaa ku jira inuu dalka gaarsiin doono halka loo baahan yahay balamadii uu qaaday lagama yaabo inuu dib u eego, waayo awoodba umalahan uu ku fuliyo balamadaas, waxaynu sugi doonaa markii uu xamar tago oo dowladda geeyo ama uu diido oo mel kala la’aado waxay Soomaali ka yeeli doonto, wax walbase waxay ku xiran yihiin sida uu dib-u-heshiisin uga sameeyo dalka gudihiisa, siduu u daaweeyo boogihii dagaalada Sokeeye, sida uu ula macaamilo culimada Soomaaliyeed ee shakiga weyn ka qaba, iyo walaaleheena Soomaaliland oo aan ku farxin doorashadiisii, amaba sida ay dowladiisu u qanciso beesha caalamka oo hadda ku jira (sug oo arag). Arrimaas oo dhan meeshii ay ku biyo shubtaan ayaan ka warsugaynaa
S: Majiraan wax horumar ah oo uu C/Laahi ka qabtay P.L. intuu uu talada hayey?
J: Run ahaantii P.L. magac ahaan ayuu abuuray, saldhig maamul goboleedna waa ka dhisay, laakiin wax kale oo lataaban karo majiraan. Arrimaha Bulshada sida waxbarashada caafimaadka , iyo wacyigalinta dadweynaha midna waxba kama qaban, maxaa yeelay hal iskuulna saqaf uma samayn, musqulna madhisin.
Waxaa intaa dheer wacyigalinta dadweynaha wax talaabo ah uma qaadin. Wuxuuna hor istaagay xoriyada saxaafadda, inuu isagu sameeyo Radye ama Tv. Xitaa joornaal iskadaayee wuxuu xakameeyey xorriyadii dadkii iskood isu xilqaamay ee damcay inay wax ka qabtaan wacyi galinta bulshada. Wuxuuna ka shaqeeyey in dadka P.L uusan warkoodu isku xirmin, maamulkii 98.dii la dhisay oo sadaxsano loogu talagay wuxuu sii haystay ilaa 7.sanadood, ilaa uu uga gudbay Madaxweyne Soomaaliyeed.
Kalimadda Dimuqraadiyadda waligiis afkiisa lagama maqal. Siyaasiyiinta gobolka u dhashayna waxay qoxooti ujoogaan Dubai. Somalilnad Hargeysa, iyo dibadahas kale.
Hantidii P.L. ee ka soo xarronayey xanshuurtii dadweynaha laga qaadayey iyo tii uu isagu shakhsiyan u lahaa uma kala soocneyn. Lacagtii ay waligood ururin jireen wuxuu uga badashay lacag cusub oo uu isaga sameeyey. Taladii lagu samayn jiray lacagahaas waxay u gaar ahaayeen isaga iyo Maaafiyada P.L joogta. Lama soo hordhigi jirin golihii Wasiirrada ee P.L. samayskeeda iyo isticmaalkeeda midna.
Hadalka hadaan soo koobo. P.L. magac mooye waxba umaqaban. Garowe oo uu guri ka daganaa mooyee meel kale uma dhaqaaqi jirin. Hadduu damco inuu meel u safro wuxuu aadi jiray Boosaaso ama Galkacayo. Degmo kale oo dhulkaas ka tirsan mabooqan waligii marka laga reebo Dhuudo oo uu duullaan dagaal u tagay. Sidaas darted waxaynu dhihi karnaa waligiis laamiga kama dagin. P.L.na waxba kama aqoon.
»Jawaab "MADAXWEYNE C/LAAHI: LAGU DOORAYEE HA DILIN " Abdi Kacaandiid
S: Maxaad u malayneysaa mustaqbalka P.L C/Laahi Yuusuf kadib?.
J: Hadda waxaa la wareegay maamulkii nin wanaagsan oo oday ah waa Maxamed Cabdi Xaashi. Laakiin waxay Soomaalidu ku maahmaahdaa “ Ayax tag eelna reeb” C/Laahi P.L wuxuu ka tagayaa isagoo aan 16. ilaa 18. aan bixinin mushaaraadkii shaqaalaha dowladda oo dhan, wuxuu kaloo katagay bilyanis daymo ah oo uu maamulku qabo.
Bad iyo barri wixii hanti ka soo galayey P.L wuxuu u isticmaalay tartankiisii musharaxnimo, wuxuuna ka tagay markii uu xaalufiyey bad iyo barri wixii yaalay P.L. Runtiina maanta burbur waxba madhaanto, ciddii la wareegtaana waxay kala kulmi doonaan dhibaato farabadan oo dhaqaale iyo colaad kaga timaada dariskooda.